Kitra – «Ligue des champions 2016» : hanamafy ny tapakilany ny Real de Madrid | NewsMada
Ho fantatra, amin’ity anio ity, izay ekipa voalohany hiakatra eo amin’ny ampahefa-dalana, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, taranja baolina kitra. Anisan’ireo hiady izany ny Real de Madrid.
Hotanterahina, amin’ity talata ity, ny lalao ampahavalon-dalana miverina, amin’ny “Ligue des champions d’Europe 2016”, taranja baolina kitra. Hiady ary hanamafy ny tapakila hiakarany amin’izany dingana izany ny Real de Madrid, izay hampiantrano ny AS Roma. Efa nanantombo tamin’ny isa 2 noho 0 ny Madrilènes, teo amin’ny fihaonana mandroso. Heverin’ny rehetra fa tsy hanana olana i Zinedine Zidane sy ny Real de Madrid, anio, izay hilalao eo amin’ny kianja mahazatra azy, sy manoloana ireo mpanohana azy, ao amin’ny kianja Santiago Bernabeu.
Raha ho an’ireo mpilalaony indray, hiverina hiakatra kianja ilay teratany gallois, Gareth Bale, rehefa niato nandritra ny 47 andro, noho ny ratra nahazo azy. Araka ny fantatra, tsy anisan’ireo hilalao amin’ity fihaonana amin’ny Rome ity i Toni Kroos sy Luka Modric. Na izany aza, efa ao anatin’ny fahasalamany koa i Marcelo.
Etsy ankilany, manaiky ry zareo Romanina fa sarotra ny miandry azy, amin’ity fihaonana anio ity, saingy vonona ary hanao izay azony atao izy ireo. “Ekipa mazana ary efa nahazo tombony no hifandona aminay, anio, saingy tsy hiraviravy tanana amin’izany izahay. Efa manao ny fanadihadiana sy mitady ny paikady rehetra, handresena ny Real de Madrid, ny mpanazatranay ka aorian’ny 90 mn isika mahita azy”, hoy i Miralem Pjanic, irakiraky ny AS Roma.
Ankoatra io lalao io, handray ny KAA Gent kosa ny VFL Wolfsburg, izay efa nandresy tamin’ny isa 3 noho 2, teo amin’ny lalao mandroso.